Puntland oo ugu baaqday Caalamka inuu ka qeyb qaato la dagaalanka Daacish ee dhulka Buuraleyda ah – VIDEO - Wargane News
Home Somali News Puntland oo ugu baaqday Caalamka inuu ka qeyb qaato la dagaalanka Daacish...
Dowlada Puntland oo sheegtay inay wado hawlgalo lagula dagaalamayo kooxaha Al Shabaab iyo Daacish ee ku sugan dhulka buuraleyda ah ayaa ugu baaqday Caalamka inuu ka qeyb qaato sidii looga hortagi lahaa in kooxahaasi ay awood ku yeeshaan buuraha saaran dhulka xeebta ah ee Geeska Afrika.
Telefishinka Skynews oo warbixin ka diyaariyey hawlgaladii ciidamada Puntland ka qabteen deegaanka Galgala iyo dagaaladii dhawaan lagu jabiyey kooxda Al Shabaab ee koonfurta gobalada Nugaal iyo Mudug, ayaa si weyn uga hadlay hogaamiyaha Kooxda Daacish ee Cabdulqaadir Muumin oo horey ugu soo noolaan jiray dalka UK.
Warbixintan ayaa waxaa sidoo kale ku jira wareysi ay la yeesheen Skynews qaar kamid ah caruurtii ay kooxda Al Shabaab Askareysay ee lagu qabtay dagaalada. Dhalintan oo hada dhaqan celis u socoto ayaa waxaa ka muuqday isbadel weyn muuqaalkoodii markii la soo qabtay.
Cabdulqaadir Muumin oo hada ku dhuumaaleysanaya dhulka buuraleyda ah ayaa dhawaan filim uu shaaciyey ku sheegaay inay sameeyeen xero lagu tababaro maleeshiyaadkooda ka tirsan ISIS ama Daacish, walow maleeshiyaadka uu soo bandhigay ay ahaayeen koox aad u yar oo gaaraya 15 qof, hadana Puntland ayaa sheegtay in loo baahan yahay in kooxahan laga hortago qorshaha ay doonayaan inta aysan xoogeysan.
Muumin ayaa hada la rumeysan yahay inuu ku sugan yahay dhulka bariga fog ee nawaaxiga Buuraha Calmiskaad / Calmisgeed oo ay qeybo kamid ah degaan beesha uu kasoo jeedo, kadib markii uu ka baxay Kooxda Al Shabaab oo horey looga qabsaday fariisinkii ay ku lahayd deegaanka Galgala iyo Buuraha Calmadow ee buuraleyda Sanaag & Galbeedka gobalka Bari.
Somalia: piracy is back with a $1.7 billion problem after shipping firms lower vigilance
Madaxtooyadda Somaliland Oo Beenisay War Lagu Sheegay In xaaladda Madaxweynuhu Liidato
Somalia on alert over possible attacks on ports
Somaliland: Xukuumadda oo ka hadashay Xadhiga Nin Sheegtay Madax-dhaqameed Aanu ahayn
Xawaaladaha US oo dib loo furayo